Title: MIMU Disaster Risk Reduction Sector - ဘးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ - (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: ဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (DRR WG) ကို ၂၀၀၈ခုနှစ် ဆိုင်ကလုန်း နာဂစ် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အစောပိုင်း ကာလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ရပ်ရွာ လူထု များ၏ ဘေးအန္တရာယ် ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင် အားပေးရန် အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအချိန် မှစ၍ DRR WG သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကွဲပြား ခြားနား၍ ကျယ်ပြန့် စုံလင်မှု အရှိဆုံး ကွန်ယက်များ အတွင်း တစ်ခု အပါအ၀င် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး လက်ရှိ အချိန်၌UN၊ နိုင်ငံတကာ NGOs၊ ပြည်တွင်း NGOsနှင့် DRR ကဏ္ဍအတွင်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် ကျွမ်းကျင်ရာ အဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း (53)ဖွဲ့ခန့် ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ DRR WG ကို အဖွဲ့ဝင် (၁၁)ဦး ပါဝင်သည့် ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီမှ ဦးစီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယင်းအဖွဲ့ အစည်းများ အတွင်း UN အဖွဲ့အစည်း (၃)ခု၊ နိုင်ငံတကာ NGOs သုံးခု၊ ပြည်တွင်း NGOs သုံးခု၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီ အသင်းနှင့် သီးခြား ပညာရှင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်တို့ ပါဝင် လျက်ရှိသည်။ DRR WG ၏ ဥက္ကဋ္ဌကို ကြီးကြပ် ရေး ကော်မတီမှ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ၌ UNDP မှ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ အဓိက တာဝန်ခံ ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခုဖြစ်သော ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည် နေရာချ ထားရေး ၀န်ကြီးဌာန (RRD) ဒါရိုက်တာချုပ် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ (NDMWC) ၏ အတွင်းအရေးမှူး လည်းဖြစ်သူမှ DRR WG ၏ တွဲဘက် အကျိုးဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ DRR လုပ်ငန်း အဖွဲ့ခွဲ (DRR SSWG) ကို RRD နှင့် UNDP တို့မှ တွဲဘက် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်များ အတွင်း နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး၊ ပြည်တွင်း NGO တစ်ခုမှ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး၊ ပညာရှင် အဖွဲ့အစည်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီ အသင်းမှ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးကျစီ ပါဝင် လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် DRR WG ၏ အဖွဲ့ဝင် များလည်း ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် DRR WG မှ ၂၀၁၄-၁၈ မဟာဗျူဟာ မူဘောင်နှင့် စီမံချက်ကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဓိက အနေဖြင့် (၁) DRR ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ မူဘောင်များကို အားဖြည့် ကူညီရန်၊ (၂) DRR အကောင်အထည် ဖော်ရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း အတွင်း DRR ကိုဖြည့်စွက် အားဖြည့်ရန်အတွက် ဋ္ဌာန ဆိုင်ရာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် များကို မြှင့်တင်ပေးရန်၊ (၃) DRR ဆိုင်ရာ လူထု အမြင်ဖွင့် မဟာဗျူဟာနှင့် ရပ်ရွာ အခြေပြု ဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး မူဘောင်ကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ရာ၌အစိုးရအား ကူညီပံ့ပိုးရန်၊ (၄) DRR ကို အလေးပေး ဆောင်ရွက်နေသည့် ပြည်တွင်း NGOs များနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်၍ယင်းတို့၏ စွမ်း ဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာအောင် ကူညီ အားဖြည့်ရန်၊ (၅) ပညာရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများနှင့် မိတ်ဘက်ပြု လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် (၆) အစိုးရအား ထိထိ ရောက်ရောက် ကူညီ ပံ့ပိုးနိုင်ရန် အတွက် DRR WG အတွင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်း လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် DRR WG ပြန်လှန် သုံးသပ်ရေး ခရီးစဉ်၌၂၀၁၄ ခုနှစ် လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်မှုအတွက် နှစ်အလိုက် လုပ်ငန်း စီမံချက်များ ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ရန် DRR WG မှ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် ကဏ္ဍရပ်များ ကို သတ်မှတ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Title: MIMU Disaster Risk Reduction Sector - English, Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: "In this study, the seismic hazards of Myanmar are analyzed based on both deterministic and probabilistic scenarios. The area of the Sumatra–Andaman Subduction Zone is newly defined and the lines of faults proposed previously are grouped into nine earthquake sources that might affect the Myanmar region. The earthquake parameters required for the seismic hazard analysis (SHA) were determined from seismicity data including paleoseismological information. Using previously determined suitable attenuation models, SHA maps were developed. For the deterministic SHA, the earthquake hazard in Myanmar varies between 0.1 g in the Eastern part up to 0.45 g along the Western part (Arakan Yoma Thrust Range). Moreover, probabilistic SHA revealed that fora2% probability of exceedance in 50 and 100 years, the levels of ground shaking along the remote area of the Arakan Yoma Thrust Range are 0.35 and 0.45 g, respectively. Meanwhile, the main cities of Myanmar located nearby the Sagaing Fault Zone, such as Mandalay, Yangon, and Naypyidaw, may be subjected to peak horizontal ground acceleration levels of around 0.25 g."
Description/subject: "Myanmar is exposed toawide range of natural hazards, triggering different types of small scale to large-scale disasters across the country’s territory. A total of 27 natural disasters have been recorded between 1980 and 2010, causing the death of approximately 140,000 people, and affecting the lives and livelihoods of 3.9 million people; an average of 125,000 peopleayear. By far the most devastating natural disaster in Myanmar’s history, cyclone Nargis tore through the Delta region in May 2008, affecting 2.4 million people and claiming the lives of 135,000“.